Cristiano Ronaldo Oo Dib Ugu Laabtay Madrid Si U Macsalaameeyo Asxaabtiisa Kooxda Real Madrid Una Soo Xirxirto Alaabtiisa Ka Hor Inta Uusan U Duulin Turin – Laacib.net
Cristiano Ronaldo Oo Dib Ugu Laabtay Madrid Si U Macsalaameeyo Asxaabtiisa Kooxda Real Madrid Una Soo Xirxirto Alaabtiisa Ka Hor Inta Uusan U Duulin Turin
14-07-2018 Saed Balaleti
Cristiano Ronaldo ayaa ku soo laabtay magaalada Madrid ee caasimada Spain. Xiddiga reer Portugal ayaa soo gabagabeeyay fasixii uu ku joogay dalka Gariiga shalay oo Jimce aheyd, waxaana uu dib ugu soo laabtay Madrid si uu u xirxirto alaabtiisa ka hor inta uusan uu u ambabixin Italy isbuuca danbe.
Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid ayaa ka soo duulay garoonka diyaaradaha Kalamata ee dalka gariiga isagoo ka soo degay garoonka Barajas ee Madrid.
Ronaldo ayaa maanta oo Sabti ah iyo berri oo Axad ah waxa uu joogi doonaa Madrid si uu alaabtiisa u xirxirto ka hor inta uusan u duulin Turin maalinta Isniinta.
Waxa labadaan maalmood ee uu joogo Madrid uu macsalaameyn doonaa asxaabtiisa, ciyaartoydii ay iska garab ciyaareen iyo shaqaalaha Real Madrid. Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo bandhigi doonaa xarunta Juventus habeenka Isniinta isagoo saxiixay heshiis afar sannadood ah.
Kabtanka xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa shir jaraa’id u qaban doona kooxdiisa cusub habeenka Isniinta Saacada Geeska Afrika marka ay tahay 7:30pm, laakiin ma jiri doonto dabaaldeg weyn oo loogu qaban doono garoonka Juventus sidii markii hore la filayay, waxaana kooxda Talyaaniga ay ciyaaryahankooda cusub u soo bandhigi doonaan si la mid ah sida ciyaartoyda kale ee kooxda timid.
Cristiano Ronaldo ayaa ka degi doona Turin subaxnimada Isniinta, waxa uu ka dib ku laaban doonaa tijaabo caafimaad kale ka hor inta aan la soo tusin adeegyada kala duwan ee kooxda. 7:30pm waxa uu qaban doonaa shirkiisii jaraa’id ee ugu horeeyay oo ka dhacaya qolka shirarka ee Giovanni e Umberto Agnelli.
Ka dib waxa uu heli doonaa maalin ama labo maalmood uu ku nasto ka hor inta uusan bilaabin inuu tababar la qaato kooxdiisa cusub ee uu hogaaminayo tababare Allegri.
Kylian Mbappe Oo Ku Biiray Liiska Xiddigo Uu Ku Jiro Pele Oo Sooyaal Naadir Ah Ka Dhigay Koobka Aduunka
Daawo: Aubameyang,Ramsy & Maitland-Niles Oo Si Cajiib Ah Ugu Tartamay Cunto Karin, Yaa Badiyay?